Dhata rekutenderera pa iPhone, kutenderera zviri nyore | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | iPhone, iPhone 3G, Zvidzidzo uye zvinyorwa
La kutenderera kwedata Iko kugona kutumira uye kugashira ruzivo pane nhare mbozha kunze kwezvivakwa zveanoshanda. Patinoenda kunze kwenyika, zvinokwanisika kuti opareta wedu haana ma antenna munyika yedu yekuenda uye, kuti tirambe tichinakidzwa nebasa rekufona uye data, tinoshandisa ma antenna eimwe opareta yemuno.
Pasina kungofamba-famba zvinokwanisika kuti hatizokwanise kubatana neinternet kana kufona kunze kwenyika, saka tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti tinayo inoshanda kana tichienda kuzororo kune imwe nyika uko opareta wedu haana zvivakwa.
Iyo data yekutenderera sarudzo yakaremara nekutadza, saka kana uchifanira kubva munyika unofanirwa kuimisikidza nekuita zvinotevera:
Maitiro ekumisikidza data kutenderera
Aya ndiwo matanho aunofanirwa kutevedzera kunakirwa kutenderera pane yako iPhone:
Handei ku marongero yeiyo iPhone.
Takatamba pa Nharembozha.
Isu tinowana data richitenderera uye isu takagadzirisa switch.
Data inotenderera, inonyatso kuzivikanwa se Kutenderera, kubva munaChikunguru 1, 2014 hapana mari yekuwedzera kune vashandisi kana tikatamira kune imwe nyika yeEuropean Community, asi kuchine mari yeimwe nyika. Zvakadaro, iwe uri mitengo inotarisirwa neEuropean Community uye pawebhusaiti yavo http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming-tariffs ivo vanotitaurira kuti ndeupi mutengo wakakwira watinogona kutibhadharisa isu kushandisa kwavo sevhisi kunze kwenyika.
Zvinoenderana neiyi data, kubva munaChikunguru 1, 2014 "chete" tinogona kubhadhariswa € 0,19 / min. yekufona kwezwi rinobuda, € 0.05 / min. yekufona kuri kuuya, € 0.06 yemeseji pfupi pfupi (SMS) uye € 0.20 / MB yeinternet. Zvakadaro, ini ndinofunga Kutenderera ndechimwe chinhu icho mazuva akwana. Havazove vashoma, asi zuva richasvika apo patinogona kushandisa nharembozha yedu mune chero nyika tisina kuwedzera bhiri redu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 3G » Dhata roaching
Iyi sarudzo inoshanda chete kana iyo iPhone ikatora anoshanda kubva kune imwe nyika. Chero bedzi iwe uri munyika yako, hazvina basa kuti unazvo sei, zvinokubatanidza.
Pindura kuna saimonx
Uye mune SETTINGS - GADZIRA Dhata -PUSH? Izvo hazvidi kuita kuti zvibvise zvakare?
Nyorera iyo nyaya, inova mashanga kwatiri, ndanga ndiri muMunich kwemazuva gumi nemashanu uye chave chiri kushamisika kwangu, € 15 yedata yakawanda pane invoice yangu.
Asi kana iwe ukamisa iyo sarudzo iwe uri munyika yako, haizobatanidze kana?
Pindura kuna kaiz
Regerera kusaziva kwangu ... asi pakati pezvimwe zvakataurwa nevamwe, wandivhiringidza.
Chii chandinofanira kuita kuti ISAZVIMBUKE? Kwete kunze kwenyika kana kuSpain.
Chii chandinofanira kuita kuti ibatanidze ese X nguva yekuongorora maemail? Iyo Push sarudzo ine chekuita nazvo?
Une chokwadi here kuti iyi sarudzo inoshanda chete kune vekunze? Wati waita here kuongorora mukati meSpain?
Beatriz Buritica akadaro
Iko kune yakapusa dzidziso (kudzima kumucheto / 3G) iyo yakatumirwa pane ino yakanaka peji muna Chikunguru 21st. Siya iphone ine FAKE VPN uye hongu inoshanda. Ndakawana bhiri rinodhura rekusaita iro basa rakadzimwa asi harichandibvumidze kupinda muEdge. Iyi inoshanda kune ese akasimba 2
Pindura Beatriz Buritica
Kwakachengeteka here…… Ndiri kuenda rwendo svondo rinouya. Kana iyi sarudzo ikamiswa, kana ndichida kutarisa tsamba yangu kana kuona peji, ichabatana here neWifi network ichipfuura 3G? Ndakaiyedza mukati meSpain uye inoramba ichibatana ne3G ... ndinofungidzira kuti, sekutaura kwandaita mune imwe komendi, inopunzika painobvuma mushandi wekunze. Imwe sarudzo ndeye kuisa iyo «Ndege Maitiro» ... asi zvokwadi, ini ndinopera mafoni ...
…. Chimwe chinhu ... Kana ikasabatana ne3G, haizobatanidze neGPRS futi, handiti? Ndatotya ...
Ndine dambudziko, kana pamwe kwete, iwe uchaona:
Ndine IPhone 2G ine vodafone yakaburitswa nefirmwar 1.1.4
Ini ndaisa iyo GPRS parameter muRED EDGE tebhu -YAKANAKA kuisa APN, USER NEZVO PASSWORD yevodafone uye ndinobatana neinternet, Safari browser nezvimwe uye zvinoshanda zvakakwana
Ndine iyo VPN windows isina kugadziridzwa
Mubvunzo wangu (dambudziko) ndewkuti kana uchinge uchitsvaga invoice yangu kuburikidza nefoni (haisati yasvika pabepa) huwandu hwe "Dhata" hunoti 0,00
Izvi ndizvo? Ndiri kureva, havana kunzwa here? kana kana invoice yevodafone yasvika, ivo vachandibhadharira iyo yekufambisa "data"
Ndingafarire maonero, kwaziso kune vese
Ndanga ndiri muChina mazuva gumi nemashanu. Dzima EDGE muBoosPrefs uye haizobatanidze kuburikidza neGPRS, ndine yekutanga chizvarwa iPhone.
Imwe mhinduro ndeyekuiisa mumhepo nendege, asi haugone kushandisa foni.
Ndakanga ndiri muCroatia kwevhiki uye ivo vakatema tambo yangu pandakadzoka. Chikonzero: Ini ndanga ndashandisa 370 euros pane data roaming. Ivo vanocheka tambo nekuti zvinoenderana nezvavakandiudza kana iwe ukapfuura imwe mari yemari unofanira kubhadhara dhipoziti yemazana mashanu emadhora kuti unakirwe netambo zvakare, zvikasadaro vakaidimbura. Ndakabhadhara maeuro mazana mashanu (chii chandingaite?) Uye pakutanga kwegore vanozoidzorera kwandiri. Saka ini ndakanunura mutsetse, asi zvakadiniko nezve mazana matatu nemakumi matanhatu emadhora? Zvinoitika kuti Telefonica yakagadzira chikumbiro muna Chikunguru kune vese vashandisi veIphone, uye kuti kusvika munaZvita 500, panobviswa 500% pamari yakashandiswa pakutenderera. Saka iyo jee yakabuda ingangoita makumi masere euros kumagumo. Pamusoro pazvose, GADZIRA Dhata RUTE! paunoenda kunze kwenyika, batanidza newifi.
Mhoroi, ndakafamba nemuEurope kwemazuva gumi nemashanu uye ndakagamuchira bhiri remakumi maviri neshanu euros nefoni zhinji nemeseji muKufamba-famba, asi chokwadi ndechekuti ndakanga ndadzibvisa. Chandaisabvisa yaive 15G neiyo Nzvimbo. Ichi chingave chikonzero?
Ndiri kufunga kutora Nokia yakare nguva inotevera ...
Mhoroi, ndinoda kuziva kuti kana vachiita iyo yekufamba data vachandibhadharisa zvakanyanya mubhiri ???? !!!!!! uye kana ndikaimisa, inongobuda seyakagara ichokwadi kana ndichifanira kugara ndichiita ive nayo mumhepo nendege kuti isatore chero chiratidzo !!!!!!
EDGAR MENDOZA akadaro
Mhoroi, ini ndaida kuziva ndisina, ndinogona mushure mekudzorera iyo iPhone kuimisikidza ne sim kadhi AT% T, NDIYO wangu wekutanga opareta Movistar Venezuela, uye ndichagara mwedzi mitatu muUS uye ndaida kutenga mobile att alla kuitora uye chip kana sim uye kuishandisa pane yangu iphone ... ini ndaida kuziva kana zvichigona kuitwa ... kwaziso nekutenda pamberi
Pindura kuna EDGAR MENDOZA
Ndine Apple iphone 3G Nhema (8GB) (AT&T) YAKAKOMBEREKWA / YAKAremara uye pachiratidziri panoti YAKAKOMBWA / YAKAKONZESA mubhokisi dzvuku zvinoreva kuti… ndinofanirwa kuibatidza
Mhoroi, ini ndine iyo iPhone 4 uye ndaona iwo makomendi uye ndinofunga kuti kana ivo vari kundiudza kuti iyo data inotenderera kunze kwenyika inofanirwa kuvhurwa, zvinoreva here kuti inofanirwa kuvhurwa pano?
Handinzwisise, nekuti ini ndakaremara uye ndine 3G nezvose
Kana ndikaimisikidza, 3G kana chimwe chakadai chingaenda nekukurumidza?
Zvisinei, kune vanhu vane chikwereti chakakura kudaro, ndinoti kana vakapusa (hapana mhosva) nekuti IPhone inouya kwauri ichidzungaira yakaremara nekutadza ipapo unogona kuichinja
Pindura kuna mia13
Asi ngatione, ndakabhadhariswa yakakwira yekufamba-famba kwaitwa. Asi mafambiro anoratidzwa mubhiri kana nhare yakavharirwa, ndiko kuti, isingashandiswe. Ini ndinotenda kuti panguva iyoyo yenguva handina kugashira anodarika mashanu mameseji uye ndisina e-mail nekuti ini handina iyo sarudzo mune yangu chero mifananidzo yakagadziriswa. Uye pakupedzisira ini ndinogamuchira kubhadhariswa kwemaawa maviri ega chaiwo kwemazuva mashanu, inova ndiyo yakamiswa bhiri.
Zvinoitika sei kuti izvi zvigoitika kana ndikasashandisa internet zvachose uye nharembozha inoramba iri pachiratidziro chemusha pasina kushandisa chiratidzo (iyo maawa maviri majaira anosvika kunyangwe husiku mumangwanani-ngwanani nguva apo ini ndakarara) kana mumwe munhu achigona kundipindura …… .ndatenda
Zvakanaka, kujekesa nyaya yacho zvishoma, ndinofunga iwe unofanirwa kuve unowedzera kuita "zvine musoro":
Kanganwa nezvekufamba kwedata, nezvimwe.
Kana iwe uri kunze kwenyika: DEACTIVATE 3G UYE MOBILE DATA NETWORK ZVAKANYANYA !!!
Kune vese avo vanowanzove neiyo iPhone ine wifi, bluetooth, 3G uye zvese zvigadzirwa zvinogara zvichishandurwa, kana iwe uri kunze kwenyika, regedza zvese kunze, kana iwe uchida, iyo WIFI, izano rangu, kuti mushure mekutyisidzira kwouya.
Dambudziko nderekuti ini ndakabvisa zvese ... uye ini handina kana wifi!
pane yangu Samsung galaxi mini data roaming yakaremara. Ndiri kuda kuzviita asi zvinondiudza inurrire nemutengo wakakura, chirongwa changu chakabhadharwa
Mhoroi munhu wese! Ndiri kuItaly, ndichiziva bhiri rinogona kuuya kwandiri ndakabvisa iyo data inotenderera, nharembozha uye 3G, ini ndinongova neWi-Fi inoshanda…. Dambudziko rangu nderekuti Wi-Fi yeimba kwandiri haina kubatana, ndinowana feni yemasaisai sezvo yakabatana asi handina kubatana chaiko, handizive kana ndichifanira kubatanidza nekugadzirisa iyo VPN ... kana pane chimwe chinhu chandiri kuita zvisirizvo ... batsira !! Ndatenda
Vakandichaja 236 euracos yekuve muAndorra kwemazuva matatu.
Maitiro ekudzimisa izvo muNokia-C6.
Pindura kuna jandro
Ndine mwero wekufamba kwemaawa makumi maviri nemana kubva pafoni yangu, ini ndiri vodafone uye ndine iyo sarudzo yakamisikidzwa…. Pane chavari kundibhadharisa here? kana kungobhadhara mari yangu? Ndatenda
ALEX FERNANDO ZVINoreva akadaro
Mhoroi NDINE KUNYANYA NDINOVIMBA KUTI UNGANDIBATSIRA VAKAUTSA ANI AIFON 6 KUBVA SHANGAY NDAKAONEKA ALETRA «R» ZVINOTEVERA CHIKAMU CHE POERADOR HAZVIZIVE NEKUTI NDAI NDINE DAMBUDZIKO NEKUSANGANISWA KWEDATA I TARIRO NDINOGONA KUTI NDINOTENDA NDINOTENDA NEZVAKO
Pindura kuna ALEX FERNANDO ZVINONZI
Maitiro ekudhawunirodha Mbudzi Simulator yemahara yekutenda kune IGN
IOS 8.4.1 download zvinongedzo